2 Unganai, chokwadi unganai,+ haiwa imi rudzi rusingachenuruki zviso nokunyara.+ 2 Murau usati wabereka chinhu chero chipi zvacho,+ zuva racho risati rapfuura sezvinoita hundi, kutsamwa kukuru kwaJehovha kusati kwauya pamusoro penyu,+ zuva rokutsamwa kwaJehovha risati rauya pamusoro penyu,+ 3 tsvakai Jehovha,+ imi vanyoro vose vepanyika,+ imi makaita zvaakatonga. Tsvakai kururama,+ tsvakai unyoro.+ Zvimwe+ mungavanzwa pazuva rokutsamwa kwaJehovha.+ 4 Nokuti Gaza richava guta rakasiyiwa;+ uye Ashkeroni richaitwa dongo.+ Kana riri Ashdhodhi,+ vacharidzinga masikati makuru;+ uye Ekroni richadzurwa.+ 5 “Vane nhamo vaya vanogara munzvimbo iri pedyo negungwa, irwo rudzi rwevaKereti!+ Shoko raJehovha riri kukurwisai. Haiwa iwe Kenani, nyika yevaFiristiya, ndichakuparadzawo, zvokuti hapazovi neanogara mauri.+ 6 Nzvimbo iri pedyo negungwa ichava mafuro,+ iine matsime evafudzi nematanga emakwai akavakwa nematombo. 7 Ichava nzvimbo yevanhu veimba yaJudha vachasara.+ Vachafura mairi. Vachazvambarara mudzimba dzomuAshkeroni munguva yemanheru. Nokuti Jehovha Mwari wavo achafunga nezvavo,+ odzosa vanhu vavo vakatapwa.”+ 8 “Ndakanzwa kuzvidza kweMoabhi+ uye mashoko okutuka evanakomana vaAmoni,+ avakazvidza nawo vanhu vangu, vakaramba vachitaura zvinhu zvokuzvitutumadza kwazvo kunharaunda yavo. 9 Naizvozvo, noupenyu hwangu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri, “Moabhi ichava seSodhoma,+ uye vanakomana vaAmoni+ vachava seGomora, nzvimbo yorukato, gomba romunyu, uye dongo nokusingagumi.+ Vanhu vangu vachasara vachavapamba, vachasara vorudzi rwangu vachavagara nhaka.+ 10 Izvi ndizvo zvavachava nazvo panzvimbo pokudada kwavo,+ nokuti vakazvidza, vakaramba vachizvitutumadza kwazvo pamberi pevanhu vaJehovha wemauto.+ 11 Jehovha achange achityisa kwavari;+ nokuti achaonza vanamwari vose vepanyika,+ uye vanhu vose vachamukotamira,+ mumwe nomumwe ari munzvimbo yake, izvo zvitsuwa zvose zvemarudzi.+ 12 “Nemiwo, imi vaItiopiya,+ muchava vanhu vakaurayiwa nebakatwa rangu.+ 13 “Achatambanudzira ruoko rwake kuchamhembe, uye achaparadza Asiriya.+ Achaita kuti Ninivhi rive dongo,+ nzvimbo isina mvura sezvakaita renje. 14 Mapoka emhuka achazvambarara mariri, idzo mhuka dzose dzomusango dzomunharaunda yacho.+ Sekwe romuromo murefu nenungu+ zvicharara pamisoro yembiru dzaro chaipo.+ Inzwi richaramba richiimba pahwindo. Chikumbaridzo chichaparadzwa; nokuti achaisa pachena mapuranga akaroverwa pamadziro.+ 15 Iri ndiro guta raipembera nomufaro rakanga rakagara rakachengeteka,+ riya raiti mumwoyo maro, ‘Ndini, uye hakuna mumwe.’+ Haiwa razova chinhu chinokatyamadza sei, nzvimbo yokuti mhuka dzomusango dzizvambarare! Munhu wose anopfuura nomariri acharidza muridzo; achavheyesa ruoko rwake.”+